မျက်နှာ V-Shape ပုံလေး လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရရှိစေဖို့ | OnDoctor
ဟိုရက်ကမှselfie ပုံလေးရိုက်တင်တုန်းသူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ကချက်ချင်းပဲကိုယ့်ပုံလေးreact ရင်း..
– ” ဟဲ့ဝင်းမြတ်နိုး..နင့်ကိုမေးပါဦးမယ်..နင်လေSurgery များလုပ်လိုက်လား?? နင့်ကိုမေးမယ်မေးမယ်နဲ့သတိထားမိတာကြာနေပြီမေးဖို့မေ့မေ့နေတာ..နင်ဝရာကနေပိန်သွားလို့နည်းနည်းပါးပါးမျက်နှာချောင်သွားတာကိုလက်ခံလို့ရတယ်..ခုကမျက်နှာကျဖွဲ့စည်းပုံကိုကအစပြောင်းသွားတာ..thread တွေထည့်ပြီးvshape လုပ်ထားတာလား??”…
– “ပေါက်တတ်ကရ..နင်တို့နဲ့ပဲအမြဲတမ်းနီးပါးတူတူရှိနေတာဘယ်နားကsurgery သွားလုပ်ချိန်ရှိလို့တုန်းမိန်းမရဲ့..”
– “ဟီး..ငါကFace yoga ဆော့တယ်ဟ..”
– “အမယ်..နင်မေးလားပြော..သူ့ဘာသူတစ်ရက်တစ်ရက်kdrama နဲ့အချိန်ကုန်နေပြီးတော့တော်..
ဒီဟာလုပ်ခြင်းအားဖြင့်မျက်နှာသွေးလည်ပါတ်မှုကောင်းပြီးအသားရေကြည်လင်လာတယ်..နောက်မလိုတဲ့အဆီတွေကျသွားပြီးမျက်နှာအချိုးစားပြေပြစ်လာတယ်ဟ..အချိန်တော့ပေးရတာပေါ့..thread ထည့်သလိုVshape တော့ဘယ်တန်းရမလဲ..
– “အရင်ဆုံးကျောမတ်မတ်ထားပြီးမျက်နှာကိုရှေ့တည့်တည့်ကြည့်..နောက်ပြီးကိုယ့်နှုတ်ခမ်းကိုအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ’O’ ဆိုပြီးနှုတ်ခမ်းကိုစု..နောက်မြန်မအက္ခရာ’ဝ’ ကိုပြန်ဆိုရင်းနှုတ်ခမ်းကိုဖြဲတဲ့အနေထားလုပ်..”အိုဝအိုဝ” ပေါ့လေ..အဲ့ဒါကို၁၀ကြိမ်လုပ်အားရင်အားသလိုတစ်ခါလုပ်ရင်၁၀ကြိမ်”